Thailand waxay soo sheegtaa diiwaanka maalinlaha ah ee caabuqa Covid -19 iyo dhimashada 141 -
Taariikh: Sabti 7 Dhul Hijjah 1442AH 17-7-2021AD By Irwan Shah Categories: Bangkok Cha-Am Chiang Mai Chiang Rai Chumphon Koofi yai Hua Hin Kanchanaburi Khao lak Khao Yai Khon Kaen Koh Beddel Koh Lanta Koh Phangan Koh Samed Krabi Lampang Loei Mae Hong Wiilka Nakhon Pathom Nan Pathum Thani Pattaya Petchabun Phang nga Jasiiradda Phi Phi Phitsanulok Phuket Rayong Samui Sukhothai Tak Thailand Trat Uthai Thani No comments
Thailand Sabtidii waxay dejisay laba ka mid ah diiwaanno cusub oo COVID ah oo naxdin leh, iyadoo 10,082 kiis oo cusub oo COVID ah maalintii la soo dhaafay ay dhaafeen 10,000 oo summad markii ugu horreysay, halka sidoo kale la dhigay rikoodh cusub oo sarreeya 141 dhimasho COVID, markii ugu horreysay waxay dhaafeen 100 mark.
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Sebtember 24, 2021 11:45 +07
Cusboonaysiinta Sabtida ayaa timid iyada oo ay dawladdu soo rogtay xayiraadyo adag oo COVID ah gudaha Bangkok iyo gobollo kale oo dhib badan ka dhacay. Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in tillaabooyinka jira ay bilaabeen Isniintii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan bandow habeenkii ah iyo xannibaadda socdaalka gobollada, aysan saameyn ku filan lahayn sidoo kale badanaana aysan helin u hoggaansanaanta dadweynaha ee ku filan.
Warka Sabtida ee COVID wuxuu fuliyey saadaashii dhawaa ee ahayd in dalka ay sida daran u saameysay uu dhowaan gaari doono 10,000 oo kiis iyo 100 dhimasho maalin kasta. Natiijooyinkii Sabtidii waxay dhaafeen rikoorkii hore ee COVID ee maalinlaha ahaa oo ahaa 9,692 xaaladood oo la dhigay maalin ka hor, iyo 98 dhimasho oo cusub ayaa la dhigay laba maalmood ka hor.
Kiisaska cusub ee COVID ee la soo sheegay Sabtidii waxaa ka mid ahaa 9,955 oo ka mid ah dadweynaha guud, sidoo kale rikoor cusub oo maalinle ah, iyo 127 kiis oo ka dhacay xabsiyada qaranka. Guud ahaan, ThailandHeerka hadda ee kiisaska COVID maalin kasta wuxuu kordhay in ka badan 60 boqolkiiba marka loo eego 6,200+ kiisaska maalinlaha ah ee laba toddobaad ka hor.
Tan iyo bilowgii masiibada, Thailand ayaa hadda diiwaangelisay 391,989 wadarta kiisaska COVID iyo 3,240 geeri guud, in kasta oo dhakhaatiirta Thai qaarkood ay sheegaan tirooyinka dhabta ah, gaar ahaan kiisaska, waxay u badan tahay inay aad uga badan yihiin.
Thailand Jimcihii ayaa mar kale soo sheegay heerar cusub oo heer sare ah oo ah kiisas COVID firfircoon oo isbitaal la dhigay (106,951), saamiga kuwa ku jira xaalad halis ah (3,367), iyo saamiga kuwa u baahan hawo-mareenada inay neefsadaan (847).
Wadarta isbitaallada COVID ee la jiifiyay ayaa labanlaabmay labadii toddobaad ee la soo dhaafay, iyo saamiga kuwa xaaladdoodu culus tahay ayaa labanlaabmay saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay. Laga bilaabo Jimcaha, ThailandXaaladda guud ee halista ah bukaannada COVID ayaa kordhay 27 maalmood oo xiriir ah, halka saamiga kuwa hawo -mareenka uu kordhay 11 maalmood oo isku xigta.
Dhanka kale, barnaamijkii tallaalka COVID oo aad u gaabis ahaa, halaagsanaa oo aad loo dhaleeceyn jiray ayaa haddana mar kale bidix soo galay Bangkok. Saraakiisha dowladda ee halkaas ku sugan ayaa sheegay inay si aan xad lahayn dib ugu dhigayaan dhammaan ballamaha tallaalka ee jira dadka jira 18 ilaa 59 si diirada loo saaro sahayda tallaalka ee xaddidan dadka waayeelka ah.
Sunset Park Resort & Spa Pattaya Halal Ma Shahaado Leh Mise Muslim Saaxiibbaa?
Aspasia Phuket Ma Xalaalbaa Mise Muslim Saaxiibbaa?
Is The Tique Patong Phuket waa Xalaal ama Hoteel Saaxiibtinimo oo Muslim ah oo ku yaal Phuket
Ma Baan Krating Jungle Beach Boutique Resort Phuket waa Xalaal ama Hoteel Saaxiibtinimo oo Muslim ah oo ku yaal Phuket
eHalal Safarka Mart > News Latest > Thailand > Bangkok > Thailand waxay soo tabisaa warbixin maalinle ah oo ku saabsan cudurada loo yaqaan 'Covid-19' iyo 141 dhimasho ah